पैसाको अभावमा १० वर्षे समिरको मृगौला फेरिएन::Hamrodamak.com
पैसाको अभावमा १० वर्षे समिरको मृगौला फेरिएन
झापा, २३ असार । शिवसताक्षी ७ हरियाली बस्तीका कक्षा ३ उतिर्ण बालक समिर माझी जीन र मृत्युको दोसाँधमा छन् । उनका दुईवटै मृगौला खराव भएका छन् । मृगौला रोगबाट थलिएका समिर स्कूल जान नसक्ने भएका छन् । उनी स्कूल जान पनि छाडेका छन् ।
विगत चार वर्षदेखि मृगौला रोगबाट थलिएका समिरको आर्थिक अभावका कारण मृगौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन ।
आमा रेणु माझीले मृगौला दिने भए पनि गरिबीका कारण त्यारोपण गर्न नसकेको बुबा गोपाल माझीले बताए । सम्पतिका नाममा झुप्रो घर भएको एक कठ्ठा जमिन पनि छोराको उपचारका लागि धितो राखेको माझीले बताए ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा मृगौला प्रत्यारोपण्मा लागि रिफर गरेको छ । तर, उनीसँग आर्थिक जोह नहुँदा छोराको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सकेका छैनन् । छोरो बचाउन पाए हुन्थ्यो, बुबा गोपालले भने, पैसा नभएरै छोराको मृगौला फेर्न पाइन । छोरा पनि बेला बेला सोध्छ, बुबा अब मलाई निको हुँदिन ? हुन्छ, हामी उपचार गर्दछौँ त भन्छौँ तर खै बचाउन पो सकिएला नसकिएला !
गोपालले छोरा बचाउने अझै आश मारेका छैनन् । पत्रपत्रिकामा समाचार छापिए, सहयोगिमनले सहयोग गर्लान भन्ने अपेक्षा छ । छोराको उपचार भन्दा दिमागमा केहि नभएको सुनाए । बुबा गोपाल माझी र छोरा समिर माझीको नाममा रहेको मेघा बैंक नेपाल, व्याङ्डाँडा, शिवसताक्षी शाखाको ०१७००५२६३१८०६ नम्बरको खातामा सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।
समिरको उपचारका लागि बीरबहादुर माझीको संयोजकत्वमा समिर बचाउ अभियान समिति गठन भएको छ । समितिले पनि जसले जति सकिन्छ त्यति सहयोग गरे बालकको जीवन बचाउन सकिने भएकाले सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ ।